Iska ilaalinta uurka - Reproduktiv Livsplan
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo looga hortago uurka. Ka-hortagga uurka waa inuusan kaa ilaalin keliya uur qaadida aan loo baahnayn, waa inuu sidoo kale ku habboonaado shakhsiyaddaada iyo jirkaaga. Mararka qaarkood waxaad u baahantahay inaad isku daydo noocyo kala duwan. Si aad u hesho ka-hortagga uurka qaarkood, waxaad u baahantahay warqad inuu kuuso qoro ummuliso ama dhakhtar. Kiniiniyada xakameeya dhalmada degdegga ah waxaa laga iibsan karaa farmashiyaha. Gudaha 1177.se waxaad ka akhrisan kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan hababka kala duwan iyo sida loo helo caawimo lagu raadinayo beddelka kugu habboon adiga iyo qaab-nololeedkaaga.
Haddii aad galmada aad ugu firfircoontahay qaab sababi kara uur laakiin aad si buuxda u hubto inaad rabin caruur (dheeraad ah) caruur aad dhashay aadna rabin/aad isticmaali karin waxyaabaha ka hortaga uurka ee kale, ka-dhigitaanka madhalays waa ka hortag uurqaadis oo aad ufiican. Xadka da’da yar ee nidaamkaan waa 25.
Ka-dhigista madhalayska waxaa lagu sameeyaa isbitaal. Halkani waxaa la gooyaa ama la xiraa marinka minka ee haweenka si ugxaanta aan loo bacrimin karin waxaan hoos loogu fogeeyaa ilmo-galeenka. Ragga, marinada shahwada ayaa la gooyaa oo dhammaantoodna waa la xiraa. Shahwadu mar dambe laguma toosin karo kaadi-mareenka, markaasna haweenka waxay xor ka tahay shahwada. Waxyeelada galmada, daadinta ugxaanta iyo soo saarka shahwada ma saameynayo habkan.
Ka-dhigista madhalayska waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay joogto. Marinada minka dib looma soo celin karo, laakiin haweeneyda ka qoomameysa habka ay martay ayaa laga yaabaa inay fursad u leedahay inay uur yeelasho iyada oo loo marayo tiknoolajiyada taranka.